Amapaki ezinhloko ezinhlanu njengesipho Sokuqala Sokuhlanganyela | Izindaba Zokuhamba
Intwasahlobo iletha nesimo sezulu esihle nemiphakathi, inhlanganisela ephelele yokuphunyuka kwelinye lamapaki wetimu athandwa kakhulu. Uhambo lomndeni olumnandi lungaba yisipho esihle kunazo zonke ezinganeni ezizothatha isidlo sazo sokuqala. Lapha siphakamisa amapaki wengqikimba lapho izingane zizoba nesikhathi esimnandi.
1 ISiam Park Adeje
2 IPort Aventura
3 IWarner Park
ISiam Park Adeje
Futhi, ISiam Park inamagagasi amakhulu okufakelwa emhlabeni: amamitha ama-3 wegagasi okufanele asetshenziswe ngabantu abanesibindi kakhulu noma ukuyibona yephuka ezinyaweni zakho onqenqemeni lwesihlabathi esimhlophe solwandle lwayo.Indlela enhle yokuqala ukuntweza phezu kwamanzi noma ukuzijabulisa ngokugxuma emagagasini.
Enye yezinto ezibabaza kakhulu iSiam Park ukuthi inedolobha elikhulu kunawo wonke laseThai ngaphandle kwase-Asia, eyakhiwa nguThais. Kuyamangalisa iqiniso? Futhi iyiphi indlela engcono yokuthatha ikhefu kunokuthokozela ukubuka okungajwayelekile kwepaki ngokuhamba ngasemfuleni iMai Thai, umfula oshisayo odabula kule paki yengqikimba enezigaba ezihamba kancane nezisheshayo ezikunikeza imibono emihle kakhulu.
IPort Aventura yindawo ekahle yokuchitha iholide lomndeni njengesipho sokuqala seSidlo. Itholakala eCosta Dorada futhi ingenye yezindawo ezinkulu zezivakashi eSpain njengoba itholakala eduze neBarcelona, ​​iTarragona kanye nomasipala baseVila-seca, eSalou naseCambrils.
EPort Aventura Resort ungajabulela ipaki yengqikimba, ipaki yamanzi ebizwa ngeCosta Caribe Aquatic Park kanye namahhotela amahle kakhulu ezinkanyezi ezine anikezela ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme kakhulu ukuchitha izinsuku ezimbalwa ogwini. Umndeni uzophila kamnandi ezindaweni eziyisithupha zepaki (iMediterrania, iPolynesia, iChina, iMexico, iFar West neSésamo Aventura) futhi uzothokozela imibukiso esatshalaliswa kuzo zonke izindawo ezahlukahlukene.
Le paki yengqikimba inesikhungo somhlangano, izinkundla ezintathu zegalufu, iBeach Club futhi ngo-2017 kuhlelwe ukuvulwa kwepaki entsha yeFerrari Land kubalandeli bohlobo lweFerrari lapho bezothola khona i-roller coaster ephakeme kakhulu futhi esheshayo.
IPort Aventura yipaki yezindikimba evakashelwa kakhulu eSpain kanti eyesithupha eYurophu. Selokhu yavula iminyango yayo ngonyaka we-1995, abantu abangaphezu kwezigidi ezingama-60 bayivakashele befuna ukunikezwa okungcono kakhulu kwezokungcebeleka eningizimu yeYurophu nesimo sezulu esikahle sokujabulela ilanga, ulwandle kanye nokudla okumnandi kwaseMedithera.
IWarner Park eMadrid yavula iminyango yayo eminyakeni eyi-14 eyedlule ukusimema ukuthi sichithe usuku oluhlekisayo phakathi kwabalingiswa abadume kakhulu beWarner universe neDC Comics, okusho ukuthi, phakathi kweBugs Bunny, iDaffy Duck, iBatman, iScooby Doo nabanye abaningi.
Ngaphezu kwalokho, inezindawo eziningi ezikhangayo ezisabalele ezindaweni zayo ezinesihloko: iHollywood Boulevard ebabazekayo, iCartoon Village neMilingo World Studios, imilingo yase-Old West Territory kanye ne-DC Super Heroes World engakholeki. Ukuheha kwayo okungama-42 kuyintokozo yezivakashi njengama-coasters ama-roller aqinile amane afana noSuperman noma uBatman avelele futhi inombhoshongo wesibili omude kunayo yonke emhlabeni. Kodwa-ke, inezinto eziningi ezikhangayo ezinjengomndeni njengeCrazy Cars, uTom noJerry noma iRio Bravo roller roller coaster.
Alikho ibhishi enhlokodolobha yaseSpain, kepha kune-oasis eMadrid yokubalekela ukushisa: iParque Warner Beach. Yindawo entsha yokuzilibazisa yomndeni yasemanzini ngaphakathi kweParque Warner lapho singajabulela ukubhukuda okuqabulayo okuhambisana nabalingiswa abathandekayo nabamnandi abavela eWarner Bros.
IBioparc iyi-zoo enezilwane eziningi zasendle eziseValencia. Yindawo ehehayo, efundisayo futhi ejabulisayo ngakho-ke yindawo ekahle yokuhamba nezingane njengesipho sesidlo sokuqala.
Inhloso yale paki ukuthi izivakashi zifunde, zijabule futhi zithuthukise ukukhathazeka kwazo ngezilwane zasendle. Lokhu kufinyelelwa yilokho ochwepheshe bakwaBioparc abakuchaza ngokuthi “ukucwiliswa kwe-zoo”, okungukuthi, ulwazi lokuzicwilisa endaweni yemvelo yezilwane ukuzibona zisebenza.
EBioparc kuyenzeka ubone izinhlobo ezahlukahlukene zezilwane zasendle ezinjengezinyamazane, izinyathi, amadube, izimfene, amadramu, ama-dik-diks, i-jaribus, izingwe, ama-lemurs, ama-mongoose, ama-anteaters, ama-red varis noma ufudu wezingwe phakathi kwezinye eziningi.
Ukuvakashela iDisneyland Paris iphupho lezingane zonke. Iyiphi indlela engcono yokuletha njengesipho sokuqala senhlanganyelo? Selokhu yavulwa ngo-1992, le paki yengqikimba engakholeki yenze amaphupho agcwaliseka kwizigidi zabancane emhlabeni jikelele.
Okuhehayo kwepaki yeDisneyland Paris kuhlobene nengqikimba yeDisney, kungenzeka kanjani ukuthi kube ngenye indlela, futhi abadumazi. Ezinye zezinto ezithakazelisa kakhulu yiSleeping Beauty's Castle, iBuzz Lightyear's Castle, i-Alice's Hatter's Mugs, iRatatouille's Adventure, neDisney Princess Pavilion.
Imibukiso ye-Eurodisney ifanelwe ukushiwo okukhethekile. Enye yezinto ezihlaba umxhwele kakhulu yi-Disney Dreams, egcwele ukukhanya, umbala nomculo. Ngesikhathi sombukiso kuvela abalingiswa abaningi beDisney, abamele i-laser ku-facade yeSleeping Beauty Castle abacula izingoma ezidume kakhulu. Iziqhumane ziyamangalisa!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Ukuhamba nezingane » Amapaki wezindikimba ezinhlanu njengesipho sokuqala seSidlo